Ny kinova finday an'ny Titanfall dia nofoanana | Vaovao momba ny gadget
Nandritra ny volana septambra lasa teo, ny orinasam-pampandrosoana izay miandraikitra ny Tintafall, Respawn Entertainment, dia nanambara fa manana tetikasa eo am-pelatanany izy io izay mety hahasambatra ny maro nefa mety hampidi-doza loatra izany. Raha ny marina, niresaka izahay fa manomana kinova finday amin'ilay lalao video Titanfall malaza ry zareo. Izahay dia niahiahy ny amin'ny fomba hiafaran'izy ireo amin'ny fampifangaroana epic toa izany, na izany aza, tahaka ny nitranga vao tsy ela tamin'i Scalebound avy amin'i Microsoft sy ny mpamorona azy, nifidy ny hanafoana ny kinova finday an'ny Titanfall izy ireo. Fihemorana vaovao ho an'ireo mpamorona izay tsy mandamina tsara ny zavatra ary miafara amin'ny fanimbana dolara an-tapitrisany.
Ho tonga amin'ny iOS sy Android ity lalao video ity, saingy tsy ho toy izany intsony. Ny fanafoanana dia navoaka tao amin'ny tranokala Titanfall: Frontline, ary nanazava izy ireo fa tsy ho afa-po ny maody lalao ary hiafara amin'ny fifandonana be amin'ilay aseho amin'ny lalao video amin'ny sehatra desktop. Misy lozika, ary izany dia ny lalao finday dia ferana amin'ny fanaraha-maso ara-batana tsy misy, izay mamela ny fanaovana lalao video miaraka amin'ny fampisehoana an-tsipiriany sy milamina saingy tsy afaka miaraka amin'ny lalao sarotra loatra, noho izany dia tsy maintsy voafetra amin'ny toetran'ny efijery mikasika, tsy mety ary tsy mahazo aina amin'ireo asa ireo.
Mifampiresaka ihany koa izy ireo fa nanararaotra nianatra zavatra betsaka izy ireo tamin'ny famolavolana ny lalao, saingy izany ny traikefa farany dia tsy vonona ny hatolotra eo ambanin'ny lohateny Titanfall, satria tsy hahafaly ny mpampiasa izany. Mandritra izany fotoana izany, ny fampandrosoana ity lalao video ity dia mety ho fanombohana ny famoronana lalao hafa mitovy amin'ny saga izay miafara amin'ny finday. Ny mazava dia misy kely na tsy misy antony hanandramana mamorona FPS ho an'ny sehatra ifandraisana raha tsy ny fetra ihany no raisintsika amin'ny resaka fifehezana, fa eo koa amin'ny fitoniana ny tambajotra data.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Nofoanana maharitra ny kinova finday an'i Titanfall
Esports dia betsaka noho ny ACB na ny Copa del Rey amin'ireo mpijery